Ngokusho yetinsita Imilunge esekhulile kusukela izinkemba abangane bakho ababili, ababulawa lapho benqaba ukulwa emelene nomunye ukulwa yezilwi. Kusukela ezinsukwini zezwe lasendulo, le mbali iwuphawu ubungani okumsulwa.
Namuhla, abatshali akanandaba nalokho ekumelelayo, nokuthi ukutshala ama Imilunge. Lezi zitshalo abasakwazi obucayi nokufuna izinto ngenkani, ngakho-ke khetha indawo ukuba ngaphambi kwesikhathi.
Njengoba angakhula lezi zimbali 3-4 iminyaka endaweni eyodwa, njengoba ezinye izilwane - kuze iminyaka 7, kungcono ukuze ufunde kabanzi mayelana nendlela ukutshala kahle ama umlunge futhi isayithi kokwehla kuyoba engcono kakhulu abangayithatha.
Gladiolas like amaningi ukukhanya, kodwa awukwazi ukubekezelela umbhalo wokuqala, ngakho ukhetho best kuyoba indawo libalele, uvikelekile ezintweni umoya. Umoya kalula aphule imbali olubangelwa okusezingeni eliphezulu ngomkhumbi inflorescences yabo.
Kusabalulekile embhedeni elise zone zezikhukhula khulula. amanzi amile kubi ngenxa izitshalo ama. Kufanele futhi ukwenza imibhede ngobuningi okusezingeni eliphezulu uma komhlaba sisondele kakhulu ebusweni. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthambisa avamile, ikakhulukazi ehlobo ezomile.
Ngo ngezithako zawo, umhlabathi ekahle umlunge kuthathwa njengesibikezelo esiyiso asidi imvelo. akazange ukuthuthukisa nenhlabathi azibukhali, futhi alikhali ngokuvamile ogulayo. Ngakho, ngaphambi kokucela ukutshala ama ka umlunge, engcono ukuhlola-PH inhlabathi.
Kukhethwa zokutshala impahla
sezimbali Abangenalwazi kungaba nzima ukukhetha futhi uthenge ama ka umlunge, ngakho kungcono ukubhekana abahlinzeki neshaya okunokwethenjelwa nasemapulazini horticultural.
Ekhomini isakhiwo imbali siyisisekelo amahlamvu tuber, phezu okuyinto izinso main, kanti phansi - lateral (ithule) ihlumela. Inikeza izinso stem ezimaphakathi nezwe, bese ifomu engezansi elincane nezilimo eziyizigaxa-izingane.
Iletha amahle izimbali Isibani ngokwesilinganiso bukhoma 3-4 iminyaka, ngemva kwalokho ilahlekelwa ukusebenza, inkulu futhi flat. Ukuthenga ama ezinkulu nge eDonets elikhulu eliyisicaba, awukwazi ukuqagela indlela efanele ukutshala ama Imilunge entwasahlobo, njengoba namanje ungayeki umbala.
Futhi okusolakala ukuba sikuqonde ama ezincane, okuyinto ngethando egade ababiza "amantombazane" njengoba zivela ongaphakeme izitshalo thinning noma uma kungenjalo ukutshalwa ubuchwepheshe yayo. Ziyakwazi ezishibhile, kodwa ngeke eziqhakaza.
Esihle zokutshala impahla - ingilazi okusezingeni eliphezulu nge evuthiwe lateral efihlekile tsvetshimi okungenani kanye.
ukulungiselela Ngiqinisile ama zokutshala iqala ekupheleni kwekwindla, lapho bephambi omiswe Kunconywa ukuba zibulale.
Uma kukhona usongo ukutheleleka thrips ingxenye, kubalulekile ukuba ubambe nezilimo eziyizigaxa ku isixazululo of 0.2-0.3% th karbofosa imizuzu 30. Uma usongo alikho, ukwandisa ukumelana fungal kanye ezibangelwa amagciwane izifo isibani ngokwanele aphansi amahora ambalwa in isixazululo potassium permanganate (2 g ngalinye 1 l amanzi) noma ukumnika garlic (100 amagremu ngamunye 3 amalitha).
Ngaphambi ecabanga ukuthi ukutshala ama Imilunge, kufanele uzilungiselele ngokucophelela. amasonto 2-3 ngaphambi kokutshala ama bahlanza kusukela husk, futhi azinazo yini izimpawu zalesi umonakalo noma ukubola.
Uma bezimisele, babe ukusika ngokucophelela futhi ezaziqoshwe indawo gcoba Zelenko, noma ufafaze ochotshoziwe carbon isebenze. anyanisi Soft futhi abolile kumelwe zilahlwe.
Ukuze izimbali waya ngokushesha ku ukukhula balimi sabhekana igcinwe nezilimo eziyizigaxa yabo amahora 13-15 in isixazululo of rosin (800 g buhlanjululwe ngo 10 amalitha amanzi). Ngemva kwalokho, amakhomu kutuswa ukuba agqoke sill iwindi ohlangothini libalele, ngakho ake izimpande.
Ukutshala ama Umlunge
Ngaphambi ukutshala ama umlunge entwasahlobo, hlola ukuthi kulungele inhlabathi. Kahle kahle, lapho umhlaba 10 cm ukujula uye sekuqala ukufudumala kuze kube degrees 10., kodwa uma kwakungenakwenzeka Tshala entwasahlobo, kutuswa ukuba wenze lokhu ngaphambi engxenyeni yokuqala ka-June, kungenjalo ngeke bakwazi ukwakha amakhomu eqinile phambi ekwindla.
Umgodi zokutshala ukujula ilingana ukuphakama ama kathathu. Ngokuvamile kuvela 7-15 cm ibanga phakathi izimbobo -. 30-35 cm begodu ukukhula kangcono wazibonela balimi belulekwa ukubeka kumugqa phambi aphansi, futhi kuphela ngemva kokuba kubo - igabade.
Lokhu kusindisa izimbali ezinkulu kusukela ipheshulwa kungenzeka womoya. Ukuze uqonde ukuthi iluphi uhlangothi ukutshala umlunge isibani kufanele ukucacisa lapho it has ipuleti impande. Right in emgodini kutuswa uthele esihlabathini kancane futhi 1/3 Umanyolo, ke uthele amanzi afudumele, unamathele tuber ufafaze phansi.
Ekuqaleni, baze amabhu amahlamvu uzisibekele izimbali ngobusuku ifilimu.
Little izimfihlo lokutshala umlunge
Umlunge - ke kudinga ukunakekelwa, futhi eside imbali. Abalimi abaningi benqaba ikhule emibhedeni yabo ngenxa "isikhathi" omkhulu naye. Kukhona izimfihlo kancane, indlela isikhathi yokuqhuma zonke ihlobo nomkhawulo ukunakekelwa ukuchelela kuphela.
Ukuze isitshalo waya ngokushesha ekukhuleni Florists wazibonela ukunikeza iseluleko sendlela ukutshala Imilunge ama e sawdust. Ukwenza lokhu kunconywa e ngasekuqaleni kuka-Ephreli kuya nezilimo eziyizigaxa lihluma ngokwanele ukuba zidluliselwa ku ekhanyayo.
Kwesonto ngaphambi kokutshala ama emhlabathini kufanele efakwa ebhokisini noma ikhabethe eDonets phansi, afafaze kahle sawdust ezimanzi. Lokhu eyoqala nokukhula ngokushesha izimpande. Ngemva zichanyuselwa, walungisa kahle, nakuba abalandeli eziningi zalezi izimbali yokutshala wenze imisele ejulile.
Beka ku amaqula esincane Umanyolo nesihlabathi kuzosiza ukugwema ukuvundiswa ezengeziwe ehlobo bese abadedela waphinda by ukuchelela. Futhi uma kwenzeka ukuthi ikhiqiza isikhawu lokubikezela kwezinsuku eziyi-10 (kuze kube sekupheleni May), umlunge ungakwazi ukujabulela zom kuze ngasekupheleni kwehlobo.
Lezi letengetiwe bayakhululwa kokuhlupheka wensimu. Kukhona futhi izimfihlo ukuthi kufanele uzivikele kanjani lezi zitshalo kusuka izinambuzane.
Eziwuhlupho eliyingozi kakhulu umlunge kukhona slugs. Abadla amaqabunga ukuziluma nezilimo eziyizigaxa ezingaba ngokuphelele ababhubhise imbali enempilo futhi emuhle. Ukuze uvikele izimbali ekuhlaselweni kwabo, kutuswa afafaze phansi emhlabeni usawoti indawo noma lwesinaphi.
Noma yimuphi izinongo ohangulayo ungayeki slugs uthole izimbali - ukudla kude izidumbu zabo. Ngu izinyendle imvukuzane lula ukuqeda ngosizo "Medvetoksa" by Ukuqedwa ke emanzini balifafaza ezweni ethintekile.
Uma isayithi kunezingane noma nezilwane, kungcono ukusebenzisa ezinobuthi, futhi isicupho. Ukuze lokhu ingezwe dropwise eduze imbali isitsha amanzi lapho izinambuzane ukukhasa ukuphuza, kodwa angikwazi ukubalekela.
Ukuvikela izimbali kusuka Ukuswaba bola, futhi kutuswa ukuba batshale zezimbali emhlabeni calendulakuva noma marigold.
Ukuze nikwazi ukutshala ama ka umlunge kufanele baqonde indlela yokumba yabo. Uma izitshalo ottsvetut, sifanamsindvo kufanele usike ukwakha isibani. Ekuqaleni kuka-Okthoba, ama kuthiwa bemba ukutshala kwabo ngonyaka ozayo. Ngaphambi ukuthi izinsuku ezingu-10 akufanele nisela. I bemba isibani uyonquma amahlamvu, yena elokusula izandla lwakhe emhlabathini. Zonke ukutshala impahla ibekwe emiphongolweni isitoreji - kuze komnyaka.
Okumangazayo nokuzula umlilo - kuyini? Ngenxa indlela ezulazulayo izibani?